သင့်ဟာ ဘယ်လိုလူဆိုတာကို ဖော်ပြပေးနိုင်မယ့် အရောင်က ဘာဖြစ်မလည်း ? | Buzzy
သင့်ဟာ ဘယ်လိုလူဆိုတာကို ဖော်ပြပေးနိုင်မယ့် အရောင်က ဘာဖြစ်မလည်း ?
အရောင်တွေနဲ့ နောက်ကွယ်က အဓိပ္ပါယ်တွေ
နိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်အလည်အပတ် သွားခွင့်ရမယ်ဆိုတာ သင်သွားချင်တဲ့နေရာက ?
သူငယ်ချင်းတွေကို ဘယ်လိုစားသောက်ဆိုင်မျိုးမှာ ညစာကျွေးချင်လည်း
အခန်းအားလုံးကို အရောင်တူတူပဲ ခြယ်မယ်
အရင်ကထက် ပိုပြီးအရောင်တောက်အောင် ခြယ်မယ်
တစ်ရက်တာ အနားယူခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအနားယူမလည်း
သင်ကအဝါရောင် မိသားစုဝင်ပါ ။ သင်က အရာရာကို အကောင်းမြင်တက်ပြီး ၊ ပြုံးချိုတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်ပါ ။ သင်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ယှဉ်ပြိုင်မောဟပွားပြီး နေလေ့မရှိပဲ အမြဲတမ်း တက်ကြွနေသူတစ်ဦးပါ ။ အခြားသူတွေကိုလည်း ကူညီဖို့ ဝန်မလေးတက်ပါဘူး။
သင်က အနီရောင် မိသားစုဝင်ပါ ။ သင်ဟာ အရာရာကို စူးစမ်းတီထွင်လိုစိတ် ရှိပြီး ၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူ တစ်ဦးပါ ။ တစ်ခုခုကို စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း သင့်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ ရှိနေတက်ပါတယ် ။ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ အလုပ်တွေကို အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်လေ့ရှိသူပါ။
သင်က အပြာရောင် မိသားစုဝင်ပါ ။ သင်ဟာ အရာရာကို အလေးအနက် ခံစားတက်ပြီး သဘာဝကို ချစ်မြတ်နိုးသူပါ ။ သင့်မှာ ထူးခြားတဲ့ အမြင်တွေ ရှိနေပြီး ၊ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် ကြိုပြီး သိနေတာမျိုး စွမ်းအားတွေ ရှိတက်ပါတယ် ။ သင်ဟာ အရာရာမှာ ထိလွယ်ရှလွယ်သူ တစ်ဦးဖြစ်တာလည်း အမှန်ပါပဲ။
You got: Silver
သင်က ငွေရောင် မိသားစုဝင်ပါ ။ သင်က တကယ့်ကို ရှားပါးလူသားတစ်ဦးပါ ၊ သင်ဟာ လူအများကြားမှာ ထင်ရှားနေတက်ပြီး ၊ စိတ်ဝင်စားခြင်း ခံရသူတစ်ဦးပါ ။ သင်ဟာ အတွေးအခေါ်လည်း မြင့်မားသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သင်က အစိမ်းရောင် မိသားစုဝင်ပါ ။ သင်ဘဝဟာ ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာပါ ။ သင်ဟာ ဘယ်နေရာမှာမဆို လူချစ်လူခင်များသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ။ သင်က သူများတွေကို ချစ်ခြင်းတရားပေးစွမ်းနိုင်သူ တစ်ဦးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
You got: Black
သင်က အနက်ရောင် မိသားစုဝင်ပါ ။ သင်ရဲ. အနက်ရောင်ကတော့ စွမ်းအားရှိခြင်း ၊ သီးသန့်ဆန်ခြင်းနဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် ရှိခြင်းတို့ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ သင်ဟာ အရာရာကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ကာ သဘာဝအားဖြင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ. အရည်အချင်းတွေ ရှိပါတယ်။
အိပ်ငိုက်နေတဲ့ ကလေးလေးဆီက အသီးအရွက်တွေအကုန်ဝယ်တဲ့အပြင် ကျောင်းပါထားပေးလိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မင်းသမီး
တရုတ်ပြည်က ဒုတိယမြောက် Victoria Secret စင်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ခွင့်ရတဲ့ မော်ဒယ်
ကောင်မလေးတွေ အရမ်းမိုက်တယ် သွားမလုပ်နဲ့ ဒိန်းဂျား :P
သင်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေကို သေဒဏ်ပေးသင့်တယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ထင်ပါသလား ?